ONLYOFFICE Nzvimbo yekushandira Inobatana neOVHcloud Pamusika | Linux Vakapindwa muropa
ONLYOFFICE Yekushandira nzvimbo inobatana neOVHcloud Musika
Vagadziri ve hofisi yakakurumbira suite ONLYOFFICE Nzvimbo yebasa kuziviswa mazuva mashoma apfuura akazivisa kusangana kwako mumusika weODHCloud, iyo inounza pamwechete mhinduro dzevaparidzi dzinoenderana neyako yekutora zvivakwa.
ONLYOFFICE ikozvino inopa mamwe makambani eEurope hofisi suite ne100% yekugamuchira kweEuropean, iyo inogona kumiririra yakasarudzika sarudzo kune iyo nharaunda dzinoda manejimendi yenzvimbo yekushandira mugore. Lever nyowani kukwikwidza neAmerican mhinduro dzemakwikwi Microsoft Office uye Gsuite.
Yakagara yakamirirwa kuti ipe 100% yeEuropean vhezheni yayo, iri pamwe neFrench shamwari Yayo Yakazara IP Solutions iyo ONLYOFFICE inotumira yayo ONLYOFFICE Workspace (yaimbove ONLYOFFICE Enterprise Edition) ichipa kumusika weVHCloud.
Izvo zvinhu zvakapihwa uye kuongororwa kwakaitwa neboka reOVHCloud kwakabvumira mhinduro kutaridzwa kune vashandisi ve25, 50, 100 uye 200 muboka re "Collaborative Suites".
"Isu tinodada kuzivisa kuti yedu ONLYOFFICE Yekushandira nzvimbo yekupa yave kuwanikwa pane yeEuropean mukurusa gore opareta, OVHcloud Musika. Uyu mukana wekuti tipe nzvimbo yekushandira yakazara mune yakatsaurirwa chiitiko, inogarwa uye inotsigirwa muFrance. Iyi Yakagadzirwa muEurope mhinduro, inogarwa muFrance neiyo huru yeEuropean cloud opareta, inobvumidza vashandisi vedu veFrance kuti vachengetedze kudzora kuzere uye kuvanzika kwedata ravo uye kuchinjana.
Munguva ino yakaoma yehutano, tinotarisira kuzokwanisa kupa mhinduro yakapfuma uye inoshanda pamwe nekudzora dhata kuchinangwa chakazara chemusika: mabhizinesi madiki, maSME, zvikoro, nharaunda, nezvimwe. "Anodaro Galina Goduhina, ONLYOFFICE Sales Director.
Yakaburitswa zhizha rino, OVHCloud Msika inoongorora uye inopa vashandisi vayo neB2B software mhinduro, ane pekugara anovimbiswa paFrance ivhu.
Vaparidzi vakakwanisa kubatanidza musika vanotevedzera bumbiro rinosanganisira mitemo yemufambiro wakanaka (kusanganisira GDPR): chinangwa ndechekubatana kuvaka hutongi hweEuropean ecosystem kuti irwisane nehegemony yegore uye GAFAM.
"Chido cheOVHcloud ndechekupa yakavhurika, yakajeka uye inodzoserwa hybrid gore modhi inoremekedza data revatengi. Iyi modhi yakavakirwa pane ecosystem yeakakwira-kuita mhinduro vatambi vanogovana ichi chakavhurika chiono cheyakavimbika gore. Sarudzo yeOOOffice yeOVHcloud nekubatanidzwa kwayo muMusika wedu inomiririra mucherechedzo wekuvimba kweiyo ecosystem yeEuropean, uye inoita mhinduro kuchishuwo chiri kukura chemakambani kuwana mhinduro dzakazvimirira uye dzakavimbika ”, anodaro Michel Paulin, CEO weOVHcloud.
Nezvo, ikozvino pane imwe nzira yeEuropean kune Microsoft Office uye Gsuite. Inesimba uye inokwikwidza imwe nzira kune masuti anopiwa nemaAmerican giants, ONLYOFFICE Workspace inzvimbo yekushandira yakazara inosanganisira zvishandiso zvine simba zvekugadzirisa, zvinoenderana neMS Office mafomati.
Nekungodzvanya mashoma, unogona kuendesa, kugadzirisa uye kubata zvakazara kubatirana nharaunda. Kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kukuru kwedata, matanho epamberi ekuchengetedza kubva pakuvimbiswa kuenda kunonyorwa kwedata rakachengetedzwa anosanganisirwa kuchengetedza kubatana.
Iyo rezinesi inoenderana nenhamba yevashandisi, Hapana muganho panhamba yekubatana panguva imwe chete. Inopa rusununguko rukuru rwekubatanidza kushambadzira: Flexible gwaro rekuwana mvumo uye inopa maviri maodhi ekubatanidza kushambadzira Mitengo yakaratidzwa inotangira kubva ku € 1.000 yevashandisi makumi maviri neshanu kusvika ku25 kuvashandisi mazana maviri.
Iyo vhezheni 11.0 iri mumabasa, pamwe neyakagadziriswazve nyowani mhando yezvigadzirwa.
Mushure mekuburitswa kwakabudirira kweOVHcloud Msika, isu hatina kukwanisa kurasikirwa nemukana uno wekupa maturusi edu, akatambirwa neumwe weakakura kwazvo maEuropean vanopa gore, kumaSME, zvikoro, nharaunda dzemunharaunda nemasangano ehurumende. Mukubatana nemudiwa wedu wechiFrench Full IP Solutions, inomiririra vanopfuura mazana mana nemazana mana vanopa hunyanzvi hwekuchengetedza IT uye vachigovera mhinduro dzayo kweanopfuura makore makumi maviri, tinogadzirira zvinyorwa nekuzvitumira kuti zviongororwe.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo. Iwe unogona kutarisa izvo zvinyorwa muchirevo chepakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » ONLYOFFICE Yekushandira nzvimbo inobatana neOVHcloud Musika